NgoMvulo weCyber, ezona teknoloji zihamba phambili kubuchwepheshe | IPhone iindaba
NgoMvulo weCyber, ezona teknoloji zintle zeAmazon
ULuis Padilla | | Izaziso, Ezahlukeneyo
Ukuba emva kweveki engaphambi koLwesihlanu oMnyama, nasemva koLwesihlanu omnyama uqobo, usenezinto oza kuzithenga ngale Khrisimesi, ungakhathazeki kuba sine-Cyber ​​Monday. NgoMvulo wentengiso kwiivenkile ezikwi-Intanethi apho iimveliso ezininzi ziya kuqhubeka ukuthengiswa, abanye bade baphucula amadili abo ngoLwesihlanu oMnyama.
Ii-headphone, izithethi, iithelevishini kunye noluhlu olude lweemveliso zinokufumaneka iiyure ezingama-24 ngamaxabiso asezantsi enyakeni, kwaye sikhethe ezinye zezo sicinga ukuba zingakunomdla kakhulu, Iimveliso ezisemgangathweni ezinamaxabiso abalulekileyo. Sikunikezela ngoluhlu olunonxibelelwano ngqo kwiAmazon engezantsi.
1 UJaybird X3
2 I-B & O Dlala iA2 esebenzayo
3 I-Samsung 49 4 UHD XNUMXK yeTV
4 I-Seagate 8TB Hard Drive
5 I-Huawei Watch 2
6 IGlass Gear S3 Classic
Ezi ntloko zeJaybird X3 zilungele nantoni na ephoswa kuwe kumathambeka nakwiindawo zokuzilolonga, okanye esitratweni. Inemiphetho yeefowuni eyilungelo elilodwa lomenzi wechiza ehleli phezulu, ngasemva nangaphantsi kweendlebe ngokubekwa okukhuselekileyo kwaye kukhululekile. Ubungakanani be-miniscule ye-X3 benza ukuba kukhululeke ukunxiba kwanesigcina-ntloko kwaye nokuba ungangxamisi kangakanani na umsebenzi. Ngeeyure eziyi-8 zobomi bebhetri *, awusoze uphulukane nokubetha, kwaye isandi esenziwe ngokwezifiso sithetha ukuba uya kuhlala unamandla owafunayo. Amaxabiso abo aqhelekileyo aphakathi kwe- 100 ukuya kwi-130 euros, kwaye namhlanje uya kuba nawo nge-euro ezingama-79 kuphela en esi sixhobo. Zikwafumaneka ngemibala eyahlukeneyo.
I-B & O Dlala iA2 esebenzayo
Isithethi seB2O esinamandla seB & O PLAY esinamandla esiphathwayo siza nesandi se-True360, intambo ye-USB-C yokutshaja ngobuchule, imitya emibini yelaphu, ukuya kuthi ga kubomi beyure ezingama-24, kwaye isebenza ngayo nayiphi na itshaja eseludongeni. Ngesandi sokutyikitya Bang & Olufsen, esi sithethi singenazingcingo siyilelwe ukukuzisela umculo ngendlela amagcisa ebengathanda ngayo-ayinyani kwaye acocekile. Qhagamshela izithethi ezimbini ezisebenzayo zeA2 ngokusebenzisa i-Beoplay kwaye udlale umculo wakho kwistereo okanye kwisandi esingqonge. Abaqhubi ngaphakathi kwesithethi seBluetooth banothuli kwaye bayaphika-kwaye amaqhosha kunye neendawo apho ialuminiyam idibana nepolymer zitywinelwe ukugcina uthuli namanzi. Ixabiso laso eliqhelekileyo yi- € 311 kwaye ngeli xesha leeyure ezingama-24 liya kubiza i-199 euros kuphela nge esi sixhobo.
I-Samsung 49 4 UHD XNUMXK yeTV
Umabonwakude we-MU7055 udibanisa umgangatho womfanekiso we-UHD kunye ne-HDR1000 kunye noyilo olubonakalayo lwe-360 ° kuyo nayiphi na i-engile. Yonwabela imifanekiso eyinyani ngakumbi. I-HDR 1000 ibonisa ngokuchanekileyo uluhlu olubanzi lokukhanya kunye namnyama kumfanekiso. Yimangaliswe ngumbono wobomi bokubonga kumbala obukhali kunye nenyani enkulu. Gcina zonke iintambo zakho zicocekile. Uyilo lukamabonakude likuvumela ukuba ufihle lonke unxibelelwano ngaphakathi kwesiseko salo. Zilungiselele ukuba uphile ngokwenyani. Indawo engabonakaliyo equlunqiweyo eya kuzisa yonke into ebomini. Ixabiso lale TV lihlala li- € 1119, kwaye namhlanje liya kubiza i- € 699 kuphela kusuka esi sixhobo.
I-Seagate 8TB Hard Drive
I-Seagate Backup Plus Hub drive inyusa ukugcinwa kwangaphandle kunye nelifu elilula okanye ukugcinwa kwefayile yendawo kwiikhompyuter zakho nakwizixhobo eziphathwayo, kwaye idibanisa ihabhu ye-USB ekuvumela ukuba ubize kwaye ulawule izixhobo zakho ezixhumeke kwi-USB. Isantya esiphezulu se-USB 3.0 kunye no-2.0 kunxibelelwano kukunika ukusebenza kweplagi kunye nokudlala kwiPC yakho ngaphandle kwesidingo sombane wangaphandle. Ixabiso laso lihlala li- € 246 kodwa kuphela namhlanje liya kubiza i-149,50 en esi sixhobo.
I-Huawei Watch 2
I-smartwatch egqwesileyo ene-Android Wear 2, ehambelana nazo zombini i-iOS kunye ne-Android, kwaye oko Inokuba yeyakho ngexabiso elikhulu le- $ 184,99 kwiAmazon, xa ihlala ixabisa malunga ne-250 euros. Unayo ngaphakathi esi sixhobo.
IGlass Gear S3 Classic
Enye indlela ebalaseleyo kwiApple Watch, ekwahambelana ne-iOS kunye ne-Android. I-Galaxy Gear S3 yeyona nto ikufutshane ekunxibeni iwotshi yesiqhelo esihlahleni kodwa ngeenzuzo ezinikezelwa zii-smartwatches. Ixabiso layo lihlala lijikeleze i- € 360 kwaye ngoku lixabisa i-295 €, kuphela iiyure ezingama-24, kwi esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » NgoMvulo weCyber, ezona teknoloji zintle zeAmazon
Akuzange kubekho uLwesihlanu omnyama okanye akukho Msombuluko weCyber. "Unikelo" olukhoyo alunjalo kwi-AliAmazon okanye kwezinye iivenkile ekuphela kwento abayithengisayo kukubhengeza ukuthengisa iimveliso eziphelelwe lixesha kwintengiso. Ukuba beziyimveliso yokutya, beziza kuphelelwa lixesha.
UAlberto Guerrero sitsho
Unikezelo ayililo lelinye ilizwe nokuba, ekuphela kwento egciniweyo ngumabonwakude "Samsung 49 ″ UHD 4K" kuba inexabiso eliphantsi kakhulu kwixabiso layo.
Phendula u-Alberto Guerrero
I-Seagate hard drive ayibonakali ngelo xabiso, nokuba ikufutshane. 🙁
I-Foxconn kunye ne-Apple ziyaqhubeka nokwenza isoyikisi sokuxhaphaza
Uyisebenzisa kanjani iYouTube njengesidlali somculo esingasemva kwi-iPhone